Uru anyị - Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Factory ozugbo na-ere
Complete mmepụta akara
Otu nwere ahụmahụ
Jighi oru oma
Ibufe ya ozigbo
Ezigbo ọrụ ahịa
Kpọọ anyị taa na 0086-18131011120 ma ọ bụ zitere anyị amy@qfcarbon.com
Nrụpụta dị elu na-akwụ ụgwọ mana ọnụahịa dị ala maka imekọ ihe ọnụ anyị ogologo oge. You nwere ike ịnwe nhọrọ dịgasị iche na uru nke ụdị niile bụ otu ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịjụ anyị.
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. bụ nnukwu carbon na-emepụta na China, nwere ihe karịrị afọ 15 na-emepụta ahụmịhe, nwere ike inye ihe carbon na ngwaahịa n'ọtụtụ ebe. Anyị na-emepụta Carbon Additives (CPC & GPC) na grad electrodes na UHP / HP / RP ọkwa.
Họrọ udi Anode Carbon Block Anthracite nke Calcined Calcined Mmanụ Ala Coke / CPC Calcined Ẹtop Coke Ihe Carbon Cathode Carbon Ngọngọ Apụta Mkpokọta Graphite Electrode eserese Iberibe eserese Graphitization Petroleum Coke / GPC Ike Ike Graphite Electrode / HP Ngwaahịa Powergachi Power Graphite Electrode / RP Ultra High Power Graphite Electrode / UHP